How to Play Video on TV from USB Pen Driver | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
USB ကကလောင်ယာဉ်မောင်းကနေစမတ်တီဗီပေါ်တွင်မီဒီယာဖိုင်မှတ်တမ်း Play လုပ်နည်း
ဇွန်လ 17, 2019 အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေး အီလက်ထရောနစ်, OS ကို-STORE, အခြား, ထုတ်ကုန်များ, နည်းပညာ 0
ရိုးရှင်းစွာသောကွောငျ့ရုပ်မြင်သံကြားတစ်ဦးရှိပါတယ်ဟုမယူဆပါနဲ့ USB port ကို, ကကလောင်ယာဉ်မောင်းကနေဖိုင်တွေကစားနိုင်ပါတယ်. အချို့ကိစ္စများတွင်ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုတည်းကိုသာရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာဆော့ဖ်ဝဲကို run ဖို့လိုအပျသူအင်ဂျင်နီယာများအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ဥပမာ, အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်ကို update သို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပေးရန်. သငျသညျကိုတရားဝင်စားသုံးသူမှလူသိရှင်ကြားမဟုတ်သောဝန်ဆောင်မှု Menu ထဲမှာတစ်ခု option ကိုဖွင့်ထားသော်လည်းတစ်ချိန်ကတချို့ကအစုံသာဗီဒီယိုဖိုင်များပြသနိုင်မည်အကြောင်း; သငျသညျဝန်ဆောင်မှု menu ကို Setting ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်တီဗီမယ့်စွမ်းဆောင်ရည်ထိခိုက်နိုင်ကဲ့သို့သော menus တွေနှင့်အတူဂရုစိုက်.
တီဗီရန်သင့် device ကိုချိတ်ဆက်ခင်မှာ, အချက်အလက်များ၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်အရှုံးထဲကနေသူတို့ကိုတားဆီးဖို့သင့်ဖိုင်များကို back up ကျေးဇူးပြုပြီး
တစ်ဦးပြင်ပ Device ကိုချိတ်ဆက်ရန်စတင် (USB မှတ်သိုလှောင်) >>>
တစ်ဦးကို USB device ကိုအဆိုပါ USB port ကိုချိတ်ဆက်သောအခါ, တဲ့ pop-up စာတမ်းကိုသင်အလွယ်တကူ USB ကိရိယာတွင်သိမ်းထားသောမီဒီယာအကြောင်းအရာပြောင်းခွင့်ပြုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.
2. သင့်ရဲ့စမတ်ထိန်းချုပ်ရေးအပေါ်မူလစာမျက်နှာခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, ပြည်ထဲရေးမျက်နှာပြင်ဝင်ရောက်ဖို့.
3. စာနယ်ဇင်းသင့်ရဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားပေါ် HOME ခလုတ်ကို, Source နှင့်ရွေးချယ်ဖို့လမ်းညွှန် USB မှတ်စက် / ချိတ်ဆက်စက်ပစ္စည်း
4. သငျသညျတီဗီပေါ်မှာကစားချင်တဲ့ဖိုင်တွေကို Select လုပ်ပါ
file format >>>
သင့် TV ကနေ video playback ကိုထောကျပံ့မယျဆိုရငျ ကလောင်ယာဉ်မောင်း, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုကြည့်ရှုရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သောအဓိကအချက်တစ်ချက်ဖိုင်ကို format တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. သင်ကထောကျပံ့ပေးသော formats ကြည့်ရှုရန်အထူး set ကိုများအတွက်အသုံးပြုသူကို manual သို့မဟုတ်ပရိုမိုးရှင်းပစ္စည်းတိုင်ပင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. အများအပြားအစုံအပေါ်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ formats MPG တို့ပါဝင်သည်, MP4,, DivX, XVID, WMA, နှင့် AVI, ဒီစာရင်းကသာအချို့ကိုထောကျပံ့ဖို့အထူးသဖြင့်အစုံအဘို့ဘုံရဲ့သော်လည်း. ပိုပြီးခဲထောက်ပံ့ထားတဲ့ formats MKV ပါဝင်သည် (အွန်လိုင်း high-definition content တွေကိုဝေမျှဘို့မကြာခဏအသုံးပြုသော), VOB (ဒီဗီဒီပေါ်တွင်အသုံးပြုဖိုင်များ) နှင့် 3GPP (ဗီဒီယိုကင်မရာများနှင့်အတူအဟောင်းများဆဲလ်ဖုန်းပေါ်တွင်အသုံးပြု format တစ်ခု). ဒါကြောင့်တိကျတဲ့ resolution ကိုအနည်းဆုံးသို့မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအထူးသဖြင့်အကွာအဝေးအတွင်းပါလျှင်တချို့ကစုံတစ်ခုသာထောက်ခံ format နဲ့ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုဆော့ကစားပါလိမ့်မယ်. ဤသူအပေါင်းတို့သည်ကန့်သတ်သင့်အထူးသဖြင့်အစုံပေါ်ကလောင်ယာဉ်မောင်းတဆင့်သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့အချို့ဗီဒီယိုဖိုင်များအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ပြန်လည်အန်ကုက်လုပ်စေခြင်းငှါဆိုလို.
ပိုမိုသိရှိလိုပါက Get – ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
Dell က 1502 1506 1515 1702 1703 1705 1707 1901 ကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုကတ်ယာဉ်မောင်းကို Windows ဒေါင်းလုပ်
ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု ပရိုဆက်ဆာ Nokia က device ကိုမော်ဒယ် ဥပဒေရေးရာအနက် processor ​​ကို HD Graphics ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် စီပီယူ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ Technology_Internet နည်းပညာ မိုဘိုင်းဖုန်း Intel က Software များ 64-နည်းနည်းက Windows စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု OS ကို-STORE HTC က Samsung က
စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု ဥပဒေရေးရာအနက် မိုဘိုင်းဖုန်း စီပီယူ Software များ HTC က Intel က Server ကို Technology_Internet Nokia က Sony Ericsson က HD Graphics ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Qualcomm မှ Samsung ရဲ့ Galaxy Intel က ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု processor ​​ကို ပရိုဆက်ဆာ စမတ်ဖုန်းများ နည်းပညာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ device ကိုမော်ဒယ် Samsung က 64-နည်းနည်းက Windows OS ကို-STORE